Xikmada Maanta Kobciye.com Iyo Shimbirkii Is Mooday Digaagada..!! - Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Xikmada Maanta Kobciye.com Iyo Shimbirkii Is Mooday Digaagada..!!
Published: December 23, 2015, 6:29 pm
Beri baa waxaa jiray Shimbir Gariir la yiraa oo ku noolaa Dhul Buuraley ah, wuxuuna Cooshad ka sameystay Dhakada sare ee Geed halkaas ku yiilay,isagoona Cooshadda dhex dhigtay Afar Ukumood oo uu dhalay. Maalintii dambe ayuu Dhul gariir xoog lihi dhacay, Ukumihii midkood ayaa soo dhacday, sidii ay u dildiloomeysayna waxay ku hoobatay God ay Digaag ku noolyihiin.
Mid Digaagga ka mid ah ayaa is tiri Ukuntan daryeel u sameey, waana ay keydisay oo ilaalisay illaa ay Ukuntii dilaacdo oo Shimbir yaroo Gariir ahi kasoo dhasho. Sidaas ayuuna Gariirkii ugu dhex noolaaday Digaagga, isagoo mar kasta is moodi jiray inuu Digaag kale yahay.
Maalin dambe ayuu Gariirkii arkay Shimbiro noociisa ah (Gariir wada ah) oo Cirka heehaabay. Wuxuu is waydiiyay bal miyaadan mar qura isku dayi karin inaad sida kuwaas adiga kuu eg oo kale u duusho?. Laakin intuu hamigaas ku jiray, ayeey Digaaggii uu lasoo koray ku qosleen, una sheegeen inuusan waligiis Duuli doonin oo Digaag un ahaanayo. Gariirkii halkaas buu kaga tanaasulay Hiigsigiisii ahaa inuu sida Gariirada kale mar un u duulo. Ugu dambeyntiina isagoo Digaag ah ayuu geeriyooday.
Waxaa halkan laga baranayaa, in haduu Qofku La heyste ama Maxbuus u noqdo Xaqiiqo aan wanaagsanayn, uuna ka haro waxa ay Naftiisu hamineyso, waxaa la arkayaa inuu abidkiis La heystanimadaas ku jiro.
Hadii aad Gariir tahay oo aad naawileyso inaad Samada duusho, dabadeedna aad hamigaaga un daba raacdo, Hadalada ay Digaaggu kugu dhahayeen ee Niyad jabinta ahna iska Dhaga tirto, waxaa hubaal ah in Awoodda duulistu ay Jirkaaga ku jirto oo Ilaahay uu ku siiyay, ee isku day inaad banaanka usoo saarto oo aad adeegsato, intaas un bay Guushu kaaga xirantahaye.
F.G: Qoraalkan waxaan kasoo ergeystay Bogga قصص وعبر
Kobciye.com – Muqdisho
Ka Digtonow Soomaalida Gaalowday! ‘Waxyaabaha Cajiibka Ah Ee Soomaalida Lagu Arkay’..!!
Wax Badan Xusuuso Oo Aad La Ilmeyn Doonto “Xusuustii Gabadhii Naxariista”..